पार्टी र सरकारविरुद्ध नेकपाका नेता लेखनाथ न्यौपानेले गरे १५ बुदें भण्डाभोर « Today Khabar
पार्टी र सरकारविरुद्ध नेकपाका नेता लेखनाथ न्यौपानेले गरे १५ बुदें भण्डाभोर
प्रकाशित २२ पुष २०७५, आईतवार १०:०३
काठमाडौँ । युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले आफ्नै नेताको भण्डाफोर गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता न्यौपानेले १५ बुँदामा आफ्नै पार्टीका नेताको भण्डाफोर गरेका हुन् । अखिल (क्रान्तिकारी) का पूर्वअध्यक्ष न्यौपाने युवा र विद्यार्थी बीचमा अति लोकप्रिय मानिन्छन् ।
उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य हुन् ।
सादा जीवनशैलीका प्रभावशाली वक्ता न्यौपानेले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत १५ बुँदामा पार्टीका सांसद र नेताको खरो आलोचना गरे । उनले लेखेका १५ बुँदा, जसको कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेकपा बदनामित हुँदै गएको छ ।
उनको स्टाटसलाई सयौँ युवाहरुले साभार गरेका छन् । करिब डेढ सयले उनकै फेसबुकबाट सेयर गरेका छन् । शक्ति नलगाई वा पैसा नखुवाई प्रतिस्पर्धा र पद्धतिमा सर्वसाधारणको काम नहुने भन्दै उनले दिग्दारी र आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
यी हुन् न्यौपानेले लेखेका १५ बुँदा :
१. हेलिकप्टर चढेर खेती अवलोकन गर्ने राष्ट्र प्रमुख
२. सार्वभौम जनप्रतिनिधि संस्थालाई मान्ने तर भ्रष्टाचार छानविनका लागि त्योभन्दा माथि अर्कै समिति बनाउने हाम्रो सरकारको काम गर्ने शैली
३. पैसा जम्मा गर्न सजिलो होस् भनेर सबै घरकै सदस्यलाई सचिवालयमा राख्ने पार्टीका नेता
४. कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुने, सँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी पनि बन्न पाइने हाम्रो नैतिकता
५. निजी संस्थालाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयलाई दवाव दिने, त्यसवापत निजी संस्थासँग पैसा खाने पार्टीका नेता
६. आफ्नै घरमा बस्ने तर सचिवालयबाट घर भाडा लिने हाम्रा सांसद
७. मन्त्री क्वार्टरमा बस्ने तर सचिवालयबाट घर भाडा लिने हाम्रा सांसद
८. चुनाब जिताउने कार्यकर्ता र जनताले तर सचिवालयमा आफ्नै छोराछोरी भाइभतिजाले भर्ने हाम्रा सांसद
९. निर्माणमार्फत देशलाई ठग्ने ठेकेदारहरू हाम्रा सांसद
१०. गैर कानूनी रूपमा आय आर्जन गर्ने मान्छेहरू जसले पार्टीका अमूक नेतालाई पैसा खुवाएर बनेका हाम्रा सांसद
११. विमान खरिदमा अर्बौ भ्रष्टाचार हुने मेरो देश
१२. दुरसञ्चारमा अर्बौको चलखेल भइरहेको मेरो देश
१३. सांसदलाई सपथ खुवाउने तर लोगो लगाएर जेल बस् भन्ने हाम्रो कानून
१४. आन्दोलन गर्ने तर शिक्षा मालिकसँग पैसा कुम्ल्याएर मुद्दा साट्ने विद्यार्थी आन्दोलन
१५. शक्ति नलगाई वा पैसा नखुवाई प्रतिस्पर्धा र पद्धतिमा सर्वसाधारणको एउटा पनि काम नहुने मेरो प्रिय देश !